Zarganar of Burma & Burmese People: Zarganar - 45 Years
Zarganar - 45 Years
အိုင် (I) သုံးလုံး နဲ့ ကိုဇာဂနာ
(ဘီဘီစီ) နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်
စွယ်စုံအနုပညာရှင် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရကို ဒီကနေ့ အီလက်ထရွန်နစ် ပုဒ်မတွေနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ နောက်ထပ် အမှု ၄ မှုကို ဆက်ရင်ဆိုင်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ထောင်ချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူဟာ အိုင် သုံးလုံးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတာ၊ IT အိုင်တီကိုလေ့လာခဲ့ပြီး INTERNET အင်တာနက်ကို သုံးခဲ့လို့ INSEIN အင်းစိန်ကို ရောက်ခဲ့ရတာ ဆိုပြီး ကိုဇာဂနာက ပြက်လုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ခယ်မဖြစ်သူက ပြောပြပါတယ်။
ကိုဇာဂနာနဲ့ အမှုတွဲတခုတည်းဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်သက်ထွေးနဲ့ ကိုသန့်ဇင်အောင် တို့ကို ထောင် ၁၅ နှစ်အသီးသီးချ ခဲ့ပြီး ကိုတင်မောင်အေးကို ထောင် ၂၉ နှစ် ချခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းတိုက်က သံဃာ ၅ ပါးနဲ့ လူ ၆ ဦးကိုလည်း ထောင်ဒဏ်တွေ အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပေ မယ့် နှစ်ဘယ်လောက်စီချခဲ့တယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
အရှင် ဂမ္ဘီရကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်
စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးအခင်းမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာတပ်ပေါင်းစုက ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရကို ဒီကနေ့ ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ထပ်ပြီး ချခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်၊ ကြာသပတေးနေ့က ထောင်ဒဏ် ၄၄ နှစ်ချခဲ့တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် အရှင်ဂမ္ဘီရဟာ စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၆၈ နှစ် ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်ဂမ္ဘီရကို သာသနာကို ညှိုးနွမ်းအောင်လုပ်မှု၊ အီလက်ထရွန်နစ်အမှု၊ မတရားသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှု၊ ဆူပူအောင်လုပ်မှုတွေနဲ့ စွဲချက်တင် အပြစ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အရှင်ဂမ္ဘီရနဲ့အတူ ၁၁ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အနက် ဦးကေလာသ ကို နောက်ထပ် ၄ နှစ် ချမှတ် ခဲ့တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ထောင် ၃၉ နှစ်၊ မဂ္ဂင်ကျောင်းဆရာတော် ဦးအိန္ဒက ကို နောက်ထပ် ၄ နှစ်ချခဲ့တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ နဲ့ ၆ လ၊ ဦးအိန္ဒရိယ ကို ၁၄ နှစ်၊ ဦးသုမန ခေါ် စာရေးဆရာ မင်းဆက် ကို ၆ နှစ်၊ အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့ အကိုတော်စပ်သူ ကိုအောင်ကျော်ကျော်နဲ့ ကိုကျော်ကျော်နိုင်ကို ထောင် ၁၄ နှစ်စီ အသီးသီး ချခဲ့ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေထဲက ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဆက်လက်ထောင်ချနေရာမှာ လူငယ်အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အထိ ချလိုက်ပါတယ်။
၅ နှစ် ထောင်ကျသူတွေထဲမှာ ကိုသိန်းသန်းထွန်း ခေါ် စမ်းချောင်းကိုကိုကြီး၊ ကိုဇော်ထက်ကိုကို၊ မသရဖီသိမ့်သိမ့်ထွန်း စတဲ့သူ ၈ ဦးကို ထောင် ၅ နှစ်ချလိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ ကိုသော်ဇင်ထွန်း၊ ကိုစောမျိုးလှိုင် စတဲ့ သူ ၅ ဦးကိုတော့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်နဲ့ စက်တင်ဘာလ ဆန္ဒပြမှုတွေနောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးခံရသူ ၉၆၀ ကျော်ရှိပြီး အခုအချိန်အထိ အဲဒီထဲကနေ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးလိုက်သူ ၁၈၀ ကျော်ရှိနေပြီလို့ AAPP ခေါ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers at 9:28 PM
How come nobody in this whole world can control this horrible Than Shwe?
Saddam form Iraq has fall and Obama won US election. The whole world wants changes and improvement. But our country hass still far far away from Democracy instaed we has all the missiries.
Zarganar awarded with "Freedom to Create" Prize
Zarganar, Aung Way and Nge Oo Mon